Lalàm-panorenana : Miantso adihevitra malalaka hoy ny Filoham-pirenena -
AccueilRaharaham-pirenenaLalàm-panorenana : Miantso adihevitra malalaka hoy ny Filoham-pirenena
21/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Efa miroso amin’ny fiatrehana ny fifidianana ny fitondram-panjakana. Nanamafy izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, izay miantso adihevitra malalaka momba ny lalàm-panorenana, izay lalàna ambony indrindra, ka tsy maintsy hajaina sy arahina. Misy ny andininy sasany ao anatin’io lalàm-panorenana io no mbola tsy nampiharina, ary sarotra ampiharina, ary ao anatin’izany ny mahakasika ny fifidianana. « Heveriko fa tokony ho resahina ny lalàm-panorenana hametrahana fifidianana milamina, andraisan’ny rehetra anjara, ankatoavin’ny eto amin’ny firenena sy any ivelany », araka ny fanazavan’ny filoha. « Lany tamin’ny fomba demokratika aho, ka adidiko ny mametraka ny fitoniana mialoha sy aorian’ny fifidianana. Ary arovako toa ny anakandriamaso ny hisian’ny fifidianana mangarahara sy milamina, ary manaja ny lalàna, indrindra ny làlam-panorenana », hoy hatrany izy.
Hatramin’ny taona 2010, nandaniana io lalàm-panorenana io, dia maro ireo nitondra fanakianana momba azy io, na ny mpanao politika, na ny fiarahamonim-pirenena, na ny fianakavimbe iraisam-pirenena… dia samy nahatsapa ny fisian’ny lesoka. Nanamarika ny filoha fa « sarotra ny nampianatra ny andininy sasantsasany amin’ny lalàm-panorenana. Tsy nisy anefa hatreto ny fanovana, na fanitsiana ». Raha ny mahakasika ny fifidianana dia ny andininy faha-47 no anisan’ny hita fa manahirana ny fampiharana azy. Io andininy io dia milaza fa noferana ho 30 ka hatramin’ny 60 andro alohan’ny fe-potoana hifaranan’ny fotoana hiasan’ny filoha am-perinasa no hanatanterahana ny fifidianana. Ireo fifidianana nifandimby anefa dia nahatsapana fa 8 ka hatramin’ny 11 herinandro no nanatanterahana ny fifidianana, fihodinana voalohany sy faharoa. Mbola tsy niresaka azy io ihany koa ny lalàm-pifidianana izay narafitra tamin’ny taona 2012. « Mbola tsy nampiharina mihitsy tamin’ny fifidianana teto Madagasikara io andininy io, ary mbola tsy nanatanteraka fifidianana indroa mihodina tao anatin’ny 30 andro isika malagasy » hoy hatrany ny filoha. « Raha hampihatra io andininy io isika, dia tsy maintsy miomana amin’ny fomba sy izay ho enti-manana hialana amin’ny olana rehetra mety hitranga satria tsy fifidianana tefy maika, izay manenjika fotoana ny hampadio ny hampangaraharahana ny fifidianana », hoy ihany izy.
Ny andininy faha-45 amin’ny lalàm-panorenana ihany koa dia milaza fa ny filoham-pirenena no antoka amin’ny fampandehanana mitohy ny fahefam-panjakana, ary miantoka ny firaisam-pirenena. « adidiko, ary adidin’ny filoham-pirenena am-perinasa ny miantso adihevitra malalaka ao anatin’ny fifanajana sy fitsinjovana ny tombontsoa ambonin’ny firenena mba handinihina io andininy io », hoy hatrany ny Filoha.
Anisan’ny efa nomen’ny Filoha vahana hatrany ny fijerena ireo vahoaka malagasy eny ifotony. Nanamafy izy fa « hiainga any ifotony ny adihevitra tokony atao, hanaovana teny ierana mba hisian’ny antoka sy hanafoana ny ahiahy ka tsy ho teny midina avy aty ambony mialoha ny handraisana fanapahan-kevitra amin’ izay mety ho fanitsiana, na tsia ny lalàm-panorenana ». Ao anatin’ny fanehoan-kevitra malalaka no hanatanterahana izany, ary tsy misy mahasakana ny vahoaka malagasy hanome ny heviny an-kalalahana araka ny voalazan’ny lalàm-panorenana.
Miantso ny sehatra rehetra ny filoha handinika ny zava-misy eo amin’io lalàm-panorenana io, haneho ny heviny sy hitondra izany amin’ny fifanakalozan-kevitra atao. Tsy tokony ho tratran’ny fomba fanaon’ny teo aloha ihany koa isika amin’ny fihantsiana sy fambolena korontana. « Tsy maintsy mitandrina isika, ka hanana ny fepetra rehetra hisorohana ny olana mety hitranga amin’ny fanatanterahana ny fifidianana. Tsy voafetran’ny fotoana ny fanapahan-kevitra hanasoa ny firenena », hoy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Fashion & Shopping dans At solmen va esser necessi far uniform lingues
Tsy misy hidiran’ny Ceni ny fivoriana notanterahin’ireo kandidà tetsy amin’ ny Cci Ivato, hoy ny filohany Hery Rakotomanana. « Tsy misy hidiran’ny ceni velively ny fivoriana izay tanterahin’ireo kandidà eny Ivato, ny an’ny ceni dia ...Tohiny
Lalao Ravalomanana:TSY TO TENY AMIN’NY MPIVAROTRA
Andro iraisam-pirenena ho an’ny Nelson Mandela : Hankalazaina manerana ireo oniversite lehibe enina
Filoha Hery Rajaonarimampianina : Manameloka ny fanonganam-panjakana
Health And Fitness: I¡¦ve learn some excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you place to make…
Fashion & Shopping: I'm still learning from you, as I'm making my way to the top as well. I definitely love reading all…